UTrevor Butterworth, iSense Mayelana neSayensi ne-STATS Spin Science for Industry
Posted on January 22, 2018 by UStacy Malkan
UTrevor Butterworth nozakwabo eSense About Science / STATS babhalele abezindaba ezivelele futhi bacashunwa njengongoti abazimele kwezesayensi nabezindaba. Leli phepha linikeza ubufakazi bokuthi la maqembu nababhali banomlando omude wokusebenzisa amaqhinga kagwayi ukwenza ukungabaza ngesayensi nokufuna ukwehliswa kwemikhiqizo ebalulekile ezimbonini zokudla ezinamakhemikhali, izidakamizwa kanye nokudla okungenamsoco.
Amaqembu ahlobene: UJon Entine / Iphrojekthi Yokufunda Ngofuzo, Isayensi Media Center, ICornell Alliance yeSayensi
Lo mbhalo weMonsanto ichaza iSense About Science njengo “Tier 2 Industry Partner” eMonsanto Uhlelo lwe-PR lokwehlisa isithunzi iphaneli lomdlavuza leWorld Health Organisation, i-International Agency for Research on Cancer (IARC). Uhlelo lweMonsanto liphakamisa i-Sense About Science ukuthi "luholele ekuphenduleni kwezimboni futhi lunikeze inkundla yezingqapheli ze-IARC nokhulumela imboni."
Isevisi Yokuhlola Izibalo (STATS) kuhlanganiswe ne I-Sense About Science USA ngo-2014. Izintatheli zibike ukuthi i-STATS “umkhankaso we-disinformation”Lokho amathiphu esikalini abheke embonini futhi idlala indima ebalulekile embonini yamakhemikhali ku- "ezombusazwe ze-hardball zokulawulwa kwamakhemikhali. "
I-Sense About Science, STATS kanye neqembu langaphambili labazali, iCentre for Media and Public Affairs, banayo izimpande embonini kagwayi PR izimpi futhi bathole uxhaso kwizisekelo eziphikisana nokulawulwa, iziteshi zemali emnyama nezimboni abazivikele.
Vimba Ukudalulwa Kwezinzwa Ngezesayensi: Ababiki Beendaba Baqaphe
Ukudalulwa kukaNovemba 2016 ku-The Intercept, “Ukuhlwanyela Kwembewu: Indlela Abazibeke Ngayo Abaqaphi Bakwa 'Sound Science' Bancoma Izikali Zezimboni,” kuchaza imininingwane ngobudlelwano bakagwayi nokuxhumana kwemboni kweSense About Science.
“I-Sense About Science ithi ikhuthaza ukusebenzela obala” kepha “ayivezi njalo lapho imithombo yayo ezindabeni eziyimpikiswano ingososayensi abanobudlelwano nezimboni ezihlolwayo,” kubhala uLiza Gross. "Uma izintatheli zibuza ngokufanele ukuthi ngubani oxhasa ucwaningo ngobungozi be-asbestos, noma amakhemikhali okwenziwa, bazokwelulekwa ukuba bangabaze nobufakazi obuvezwa yiSense About Science kulezi zingxoxo."
Umlando Wokuvikela Amakhemikhali, Ukudla Okungafuneki Nezidakamizwa
I-Sense About Science yasungulwa njengeqembu lokwamukela izivakashi e-UK ngo-2002 nguDick Taverne, usopolitiki waseNgilandi nosomabhizinisi zibopha imboni kagwayi nezinye izimboni I-Sense About Science ivikele.
Uhlobo lwe-US lweqembu yethulwa ngo-2014 eBrooklyn ngaphansi kobuqondisi bukaTrevor Butterworth. Kusukela ngo-2003 kuya ku-2014, iButterworth ibingumhleli ku STATS, okumanje ihlanganiswe ne-Sense About Science USA. Ngesikhathi esebenza, uButterworth uqoqe umsebenzi omkhulu ophikisana nokususwa kanye nokuhlaselwa kososayensi nezintatheli eziphakamisa ukukhathazeka ngemikhiqizo ebalulekile ezimbonini zamakhemikhali, zokudla okungenamsoco nezidakamizwa - ngokwesibonelo phthalates, BPA, i-vinyl plastic, ukukhwabanisa, ukuhola ngezindebe zomlomo, i-formaldehyde insipho yengane, isiraphu yengqolowa, ama-sodas anoshukela, izithako zokufakelwa futhi Oxycontin.
IButterworth nayo iyi- ovakashele esikanye naye eCornell University Alliance for Science, umkhankaso wezokuxhumana obuseCornell University oxhaswe yiGates Foundation ukuze khuthaza ama-GMO. IButterworth iyagijima indawo yokusebenzela eCornell ukufundisa uhlobo lwakhe lobudlelwano nabezindaba kubafundi nososayensi abasebasha.
URebecca Goldin, uprofesa wezibalo waseGeorge Mason University, unguMqondisi we-STATS futhi uvela kwi-Sense About Science USA ikhasi labasebenzi.
Phambilini abakwa-STATS babehlaliswe eGeorge Mason University futhi bafaka amafomu entela ngokuhlanganyela neCentre of Media and Public Affairs (CMPA), okuyiqembu elaqashwa nguPhillip Morris ngawo-1990 ukuba khetha imibiko yabezindaba ngogwayi. I-STATS ne-CMPA bezingacaciswanga ngokuxhaswa kwazo. Ubuningi be imali ye-STATS kubonakala sengathi ivela eqenjini elincane lezisekelo ezilwa nokulawulwa okuhola abaxhasi bamaqembu aphika ukuguquguquka kwesimo sezulu.
Amaqhinga aseButterworth, Goldin ne IZIBALO kuyabonakala emsebenzini wabo wokuvikela i-Oxycontin; babhale izindatshana bephika inkinga yokuluthwa i-opioid enqunywe ngodokotela, bagxeka ukusakazwa kwabezindaba futhi baphikisana nemithetho yokubusa kwimigomo. Bona izindatshana ku- Forbes (EButterworth), IZIBALO.org (Goldin), kanye Scientific American, Huffington Post futhi Slate (okwedlule IZIBALO Mfowethu Maia Szavalitz). Ukuhlaziywa okusha ngu Abaphenyi baseHarvard ne-CNN ithole ukuthi imiyalo ye-opioid kadokotela iyinkinga ngempela: “abenzi bama-opioid bakhokhela odokotela izizumbulu zemali, futhi lapho opioid eyinikeza udokotela ngokwengeziwe, wenza imali eyengeziwe.”
Ukuphikwa Kwesayensi Yezulu
A 2002 ibhuku ngumsunguli we-STATS / CMPA uRobert Lichter, uDavid Murray we-STATS noJoel Schwartz we-Hudson Institute bayiphikile isayensi yezulu, phakathi kwezinye izindaba zesayensi, futhi basebenzisa izindlela eziningi "zokuphikisa" ukuhlasela abezindaba, kufaka phakathi ukushiya okutholakele okungahambisani ne-ajenda yabo nokusebenzisa ukuhlaziywa kwezibalo okungajulile, ngokusho kwe- ukubuyekeza eSalon nguDavid Appell. Ephawula le ncwadi, u-Appell wabhala: “Ingabe ukhathazekile ngokufa kwezinhlobo eziphilayo ngenxa yokufudumala kwembulunga yonke? Ungenzi. Lezo zindaba ezesabisayo zenziwa ngababhali abaluhlaza abathanda amaphephabhuku ezesayensi ukuze bathole ama-factoid ethusayo futhi abasebenza ngokubambisana nososayensi abashayela iVolvo abasonta imiphumela yabo ngomzamo wokuphikisana nenqubekela phambili nobungxiwankulu. ” Bona ngezansi ukuthola eminye imininingwane mayelana Uxhaso lwe-STATS kusuka ekuphikisweni kwesimo sezulu ngenethiwekhi yemali emnyama.
Umbhali Wezobudlelwano Komphakathi Wezimboni Zamakhemikhali
Umqondisi weSense About Science USA uTrevor Butterworth ubambe iqhaza elibalulekile emkhankasweni wenkulumo-ze wemboni yamakhemikhali wokuhlambalaza ukukhathazeka kwezempilo nge-chemical bisphenol A (BPA) ngenkathi ese-STATS, ngokusho kuka-2009 uphenyo yi-Milwaukee Journal Sentinel.
Izintatheli uMeg Kissinger noSusanne Rust bachaze iButterworth njengesibonelo “sababhali bezobudlelwano bomphakathi embonini yamakhemikhali” abangachazi ukwethembeka kwabo. Bachaze iqhaza ayelibambile ekwenziweni komkhankaso "okungakaze kube khona kwezobudlelwano bomphakathi okusebenzisa izindlela eziningi ezifanayo - nabantu - imboni kagwayi esetshenzisiwe ekulweni kwayo nomthetho isikhathi eside":
"Ukuvikelwa kweBPA kumablogi kuvela kuTrevor Butterworth… Uhlala ehlanganisa i-Inthanethi ngezindaba ezikhuluma nge-BPA futhi anikeze imibono ngaphandle kokuveza ubuhlobo bakhe nezimboni."
Ku-athikili ehambisana nayo, uKissinger noRust kuchazwe ama-STATS "njengomdlali omkhulu emkhankasweni wobudlelwano bomphakathi wokuhlambalaza ukukhathazeka" ngeBPA. Yize leli qembu, “lizisholo ukuthi liyinhlangano yezindaba ezimele,” babhala:
“Ukubuyekezwa kwezimali zayo neWebhusayithi yayo kukhombisa ukuthi i-STATS ixhaswa ngezinhlangano zezinqubomgomo zomphakathi ezikhuthaza ukupheliswa komthetho. I-Journal Sentinel yathola imibhalo ekhombisa ukuthi inhlangano yabazali bayo, iCentre for Media and Public Affairs, yakhokhelwa ngeminyaka yawo-1990 nguPhilip Morris, inkampani kagwayi, ukuze ahlukanise izindaba ezibucayi ngokubhema. ”
Baveze ukuthi umbiko waseButterworth onamagama angama-27,000 we-STATS ugxeka ukusakazwa kwabezindaba nge-BPA - okwakudlalwa kakhulu kumawebhusayithi ezimboni zepulasitiki - “uhambisana nendlela esetshenziswe ekuhlaziyweni kukagwayi.”
Ngo-2014, isikhulu esiphezulu seCoca-Cola sachaza iButterworth “njengomngani wethu” kumalungu eqembu eliphambili elixhaswe yiCoke, futhi lamfaka njengomuntu ongasiza ekugcwaliseni “isidingo sabo sezintatheli ezisebenza kahle kwezesayensi,” ngokusho kwama-imeyili etholwe yi-US Right to Know.
Ukuhwebelana ngama-imeyili kubandakanye uRhona Applebaum, ngaleso sikhathi owayeyisikhulu sezesayensi nezempilo eCoca-Cola, kanye nabaholi beGlobal Energy Balance Network (GEBN), evezwe yi I-New York Times futhi Associated Press njengeqembu langaphambili leCoca-Cola ebelisebenza eduze nabaphathi beCoke ukususa icala lokukhuluphala kude neziphuzo ezinoshukela. I-Applebaum wasula esikhundleni sakhe eCoke futhi I-GEBN ivaliwe ngemuva kokugqashuka ngo-2015.
Phakathi ku Mashi 2014 i-imeyili, I-Applebaum idlulisele abaholi be-GEBN i-Harvard Business Review i-athikili ebhalwe eButterworth leyo izama ukudicilela phansi ucwaningo olumatanisa ushukela nokuzonda kwesisindo, futhi yamchaza “njengomngani wethu.” Kwi Novemba 2014 uchungechunge lwe-imeyili, I-Applebaum kanye nabaholi be-GEBN baxoxe ngesidingo sokuqasha izikhungo zesayensi futhi bathole ososayensi abengeziwe "kwisekethe." I-Applebaum yancoma "isidingo sezintatheli ezinhle zesayensi njengengxenye ye-GEBN egxila ebufakazini. Wethula ngokucatshangelwa uTrevor Butterworth. Ngidinga lolo hlobo lokukhulelwa. ”
Iphini likamengameli weGEBN uSteven Blair ubhale wathi, “Ngiyavumelana noRona ngoTrevor. Nginesiqiniseko sokuthi usohlwini lwamalungu angaba amalungu. ” U-Applebaum uphendule wathi, "Ukulungele futhi uyakwazi."
I-Ally yamaqembu amaningi ezimboni
Imibhalo ebanzi yaseButterworth evikela amakhemikhali, ushukela noshukela esikhundleni sekuhehe udumo lwamaqembu amaningi ezimboni kule minyaka edlule.
Amaqembu ezohwebo akhuthaze umsebenzi waseButterworth afaka phakathi I-American Beverage Association, lo I-American Chemistry Council, lo INorth American Metal Packaging Alliance, lo Inhlangano Yomhlaba Yamanzi Amabhodlela, lo I-International Sweeteners Association, the I-Plastics Industry Trade Association, lo inhlangano yezokuhweba embonini yezimonyo, imboni yamakhemikhali inqubomgomo iwebhusayithi, lo Isikhungo Sokuncintisana Samabhizinisi, lo Cato Institute futhi Isikhungo Senkululeko Yabathengi.
The Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, iqembu eliphambili lezimboni lelo kukhuthaza njalo Umsebenzi kaButterworth, umchaze njengo “master junk science debunker” futhi “njengomngani wethu”
IButterworth nayo ibhalwe njenge umngani weNational Press Foundation. Usihlalo weSense About Science USA, UHeather Dahl, nguisihlalo esedlule esedlule”WeNational Press Foundation, futhi uhlala ekomidini eliphezulu le-NPF.
I-Sucralose Echo Chamber
IButterworth ingumvikeli ovelele wamaswidi okwenziwa okuphepha kwawo okungabazekayo. Ngo-2011, uButterworth wakhuluma engqungqutheleni i-International Sweeteners Association futhi wabonakala nakowabo isitatimende sephephandaba enesihloko esithi, "Ochwepheshe Bancoma Ama-sweeteners Ase-Low-Calorie afana ne-Sucralose to Help Manage Weight."
Ukhonjwe njengesintatheli esivame ukufaka isandla kwi-Financial Times naseWall Street Journal, uButterworth uthe nge-sucralose, “Isisindo sobufakazi besayensi obucatshangelwe, umphumela wokuhlolisisa ngokucophelela, ozimele, ochwepheshe, kukhombisa kaningi ukuthi abukho ubufakazi bokuthi engcupheni yezempilo. ”
Njengesibonelo sendlela imboni ekhiqiza imboni esebenza ngayo ukujija izintatheli: Ngo-2012, eButterworth ubhalele iForbes indatshana ukuhlasela ucwaningo olwaveza ukukhathazeka nge-sucralose nguDkt. Morando Soffritti, umqondisi weRamazzini Institute, ayichaze ngokuthi "yinto yokuhlekisa."
Ku-2016 isitatimende sephephandaba, ephendula olunye ucwaningo lweSoffritti, iqembu eliphambili embonini yezokudla Umkhandlu Wokwaziswa Kwezokudla Womhlaba Wonke kwafakwa izingcezu zaseButterworth ngo-2012 nezingcaphuno zokuhlasela, kanti bathathwa yizintatheli e- The Independent, The Daily Mail, Telegraph futhi Deseret News, bonke bakhombe iButterworth njengomthombo ophuma eForbes.
Ukuseshwa kwe-Google yiRamazzini Institute kuvela ukuthi iButterworth yango-2012 iForbes yaba yinto yokuqala.
Ixhaswe yi-Network Climate Change Denier Dark Money Network
Ngenkathi i-STATS ithi ayithathi hlangothi, inqwaba yemali isuke ivela kwizisekelo ezimbalwa ezilandelanayo, eziphikisana nemithetho ebambe iqhaza elikhulu ekuxhaseni izinhlangano ezizama ukudicilela phansi isayensi yezulu.
Ngokuvumelana ne Uphenyo lokunqanda:
“Phakathi kuka-1998 no-2014, abakwa-STATS bathole ama- $ 4.5 million, amaphesenti angama-81 eminikelo yabo, evela kuSearle Freedom Trust, iSarah Scaife Foundation, iJohn M. Olin Foundation, iDonors Trust (isikhwama esasekelwa kakhulu nguCharles Koch), nelinye ilungelo izisekelo -wing. Searle, okuyi ichaza umsebenzi wayo njengokukhuthaza 'inkululeko yezomnotho,' kunikeze ama-STATS $ 959,000 phakathi kuka-2010 no-2014.
Izisekelo zokulwa nomthetho, kufaka phakathi lezi, zichithe imali engaphezu kwesigamu sezigidigidi phakathi kuka-2003 no-2010 'ukukhohlisa nokudukisa umphakathi ngesimo sesayensi yezulu kanye nosongo olubangelwa ukuguquguquka kwesimo sezulu,' ngokusho kocwaningo lwango-2013 olwenziwe yisazi sezenhlalo eDrexel University uRobert Brulle. ”
In the isitatimende sephephandaba maqondana nesifundo sakhe, uBrulle uveze ukuthi izisekelo zeScaife neSearle ziphakathi "kwabaxhasi abakhulu kunabo bonke bezinhlangano ezihlela ukwenqaba ukuguquguquka kwesimo sezulu" kanye nezisekelo "ezikhuthaza imibono engenamakethe emikhakheni eminingi."
I-Scaife Foundation neSearle Freedom Trust kube ngabaxhasi abakhulu be-STATS, nge-Scaife ihlinzeka cishe yonke imali yeqembu phakathi kuka-2005 kuya ku-2007, ngokusho kweGreenpeace uphenyo ngezimali ze-STATS, kanti uSearle wenyuka ngemali ecishe ibe yisigidi samaRandi phakathi kuka-2010 no-2014.
UMongameli kanye noMphathi Omkhulu weSearle Freedom Trust, UKimberly Dennis, futhi ungusihlalo webhodi labaqondisi beDonors Trust, iqembu uMama Jones alibize nge- “i-ATM yemali emnyama yenhlangano elondolozayo, ”Kanye no-a ohola imali wenqaba ukuguquguquka kwesimo sezulu nezinhlangano ezingabazayo. Ngaphansi kobuholi bukaDennis, iSearle Foundation neDonors Trust yathumela imali engama- $ 290,000 ku-STATS ngo-2010, eGreenpeace kubika.
IKoch Industries / iGeorge Mason University Foundation
UCharles Koch, oyi-CEO ye-petrochemical conglomerate Koch Industries, unikeze imali engaphezu kuka- $ 100 million emakhampasi angama-361 asuka ngo-2005 kuya ku-2014, ngokusho kweGreenpeace ukuhlaziywa kokufakwa kwe-IRS. The IGeorge Mason University Foundation, othole izigidi ezingama- $ 45.5, nguyena owazuza kakhulu kulokhu.
Abafundi bakwaGMU baphakamise ukukhathazeka ngemali yoKoch encwadini yango-2014 kumongameli we-GMU, ephawula ukuthi inyuvesi "igxekiwe njengenkampani engaphansi kweKoch Industries." Ukuphendula isicelo samarekhodi esidlangalaleni solwazi mayelana noxhaso lukaKoch, abafundi "batshelwe ukuthi yonke iminikelo yezezimali ihanjiswa ngeGMU Foundation, engadingi ukuphendula isicelo sethu seFOIA njengenhlangano ezimele ehlukile."
I-GMU Foundation ixhase udadewabo wenhlangano i-CMPA $ 220,990 e 2012, kanye ne- $ 75,670 e 2013, ngokuya ngamarekhodi entela. Ngaleyo minyaka i-CMPA nayo yasiza ngezezimali ama-STATS. In 2012, Abakwa-STATS babike isikweletu esingu- $ 203,611 esivela ku-CMPA ukuthi “ngenxa yokunganeliswa kwemali” “akubuyiswanga.” In 2013, Abakwa-STATS babike imalimboleko evela ku-CMPA ngo- $ 163,914.
Amarekhodi entela ka-2014 akhombisi ukubolekwa kwemali phakathi kwamaqembu noma iminikelo evela ku-GMU Foundation. Ukufakwa kwentela kwe-CMPA ka-2014 ikhombisa isinxephezelo se- $ 97,512 seButterworth ne- $ 173,100 sikaJon Entine, isikhathi eside Ukusebenzisana komphakathi ngokuxhumana okujulile nomkhakha wamakhemikhali, oqhuba i- Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, A iqembu eliphambili lezimboni zezolimo.
I-STATS manje yabelana ngewebhusayithi neSense About Science USA, futhi inikeza lokhu inothi ngezimali:
“I-STATS.org iphethwe yiSense About Science USA; it is grants grants from the Searle Freedom Trust and a donance from the American Statistical Association. I-Sense About Science USA ixhaswe yiLaura noJohn Arnold Foundation neminikelo evela kumalungu omphakathi. I-Sense About Science USA ayemukeli ukuxhaswa noma ukwesekwa kwemboni. I-Sense About Science USA izimele ngokuphelele kunoma iyiphi inyuvesi, umphakathi, noma enye inhlangano. ”
The iwebhusayithi idlulisa umuzwa wokusekelwa emazingeni aphansi, ephawula ukuthi umkhankaso wayo odinga ukubhaliswa kwezilingo zemithi yokwelashwa udonse abaxhasi abangama-30,000. “Asinawo amahhovisi kanokusho. I-Sense About Science USA ingemuva kwesitolo sokubhaka kanye nekhefi. Sibeka imali yethu ekwenzeni, futhi konke okuncane kuyasiza. ”
Kokubili i-STATS ne-Sense Mayelana neSayensi kunezimpande embonini kagwayi izimpi ze-PR.
I-STATS ne-CMPA zisungulwe nguRobert Lichter, PhD, owayengumhlaziyi wezindaba zeFox kanye noprofesa wezokuxhumana eGMU. UPhillip Morris wenza isivumelwano no-CMPA noLichter ngawo-1990, ngokusho kwemibhalo evela kuTobacco Institute eyatholakala emtatsheni wezincwadi zomkhakha kagwayi i-UCSF.
Ngo-1994, uPhillip Morris wafuna usizo lweCMPA ekubhekaneni “nokuhlaselwa kwakamuva kwemboni kagwayi” kwabezindaba, ngokusho kwe imemo yangaphakathi ukuphakamisa amasu okuthi “abuyise ukunakwa kwabezindaba ngesidingo sokunganaki.”
Kwi-imeyili yangoFebhuwari 8, 1999, iphini likamongameli uPhillip Morris uVic Han wabiza iCMPA "njengeqembu elibheka abezindaba esibe nesandla kulo eminyakeni embalwa edlule," I-Milwaukee Journal Sentinel kubikiwe.
Umsunguli weSense About Science, uDick Taverne, naye uvela kumafayela wemboni kagwayi we-UCSF. Njengoba uLiza Gross echaza ku I-Intercept:
“Ngokwamaphepha angaphakathi akhishwe enkantolo ngabenzi bakagwayi, inkampani yababonisi bakaTaverne, iPRIMA Europe, isize iBritish American Tobacco ukuthuthukisa ubudlelwane nabatshalizimali bayo futhi shaya imithetho yaseYurophu ngogwayi ngawo-1990. UTaverne uqobo usebenze kuphrojekthi yabatshalizimali: Ku- imemo engenalo usuku, U-PRIMA uqinisekise inkampani kagwayi ukuthi 'umsebenzi uzokwenziwa mathupha nguDick Taverne,' ngoba ubekwazi ukuxoxisana nabaholi bezimboni futhi 'uzofuna ukuqinisekisa ukuthi izidingo zomkhakha zibaluleke kakhulu ezingqondweni zabantu.'
Phakathi neminyaka eyishumi efanayo, uTaverne wayehleli ebhodini legatsha laseBrithani lenkampani yezokuxhumana yomphakathi iBurson-Marsteller, eyabiza uPhilip Morris njengekhasimende. Umqondo weqembu “lesayensi elizwakalayo”, elenziwe ngoxhaxha lososayensi ababezokhuluma bephikisana nemithethonqubo abantu bezimboni ababengenakho ukwethembeka ukuyiphikisa, kwakuyinkulumo uBurson-Marsteller ayenza kuPhilip Morris ku Imemorandamu yonyaka we-1994. "
UTaverne wesule esikhundleni sokuba ngusihlalo weSense About Science ngo-2012. ISense About Science USA yethulwa ngo-2014 eBrooklyn iqondiswa iButterworth. La maqembu womabili achazwa njengezinhlangano ezingosisi “ezinobudlelwano obusondelene nezinhloso ezifanayo.”
Ukudalula i-'Bogus Science 'Nge-Living Marxism Network
U-Lord Taverne wasungula iSense About Science ngo-2002 ukuze "adalule isayensi mbumbulu," ngokusho kuka imemori yakhe. Njengoba uLiza Gross echaze ku I-Intercept, abaxhasi bokuqala baleli qembu babandakanya amanye amaklayenti amabhizinisi wangaphambili kaTaverne nezinkampani ayengumnikazi wesitoko kuzo.
Njengemiklamo yayo yokuqala, iSense About Science ihlele incwadi evela ku- 114 ososayensi ukunxenxa uhulumeni waseBrithani ukuba "aphikisane nezimangalo ezingamanga" mayelana nama-GMO, futhi wenza inhlolovo ukugqamisa inkinga yokucekelwa phansi kwesivuno seGMO.
Ngo-2000, uTaverne wasiza ekwakheni i- “Indlela Yokuziphatha: Imihlahlandlela Yezokuxhumana Kwezesayensi Nezempilo, ”Imanifesto yeSocial Institute Research Center kanye neRoyal Institution ngezinqubo izintatheli nososayensi okufanele bazisebenzise ukugwema" izindaba ezesabisayo "ezingekho emthethweni kwabezindaba.
Izinkombandlela bekungumbhalo oyisisekelo weSense About Science kanye nenhlangano engudadewabo, i- Isayensi Media Center, iqembu elibiziwe "Inhlangano ye-PR yesayensi." Ixhaswe ngokwengxenye yizinkampani, iScience Media Center ivame ukukhuthaza imibono yososayensi abathihlisa ingozi ngobuchwepheshe namakhemikhali aphikisanayo, nomsebenzi wayo wokuqala obandakanyekile ukuvikela ama-GMO kusetshenziswa amaqhinga okuntshontsha.
Njengababhali UGeorge Monbiot, UZac Goldsmith, UJonathan Matthews kanti abanye babhale phansi, zombili i-Sense About Science kanye neScience Media Center zivela futhi ziqondiswa yinethiwekhi yabantu abaxhumene ne-Revolutionary Communist Party, eyathi kamuva yahlangana Ukuphila kweMarxism, Umagazini we-LM, I-Spiked Magazine futhi Isikhungo Semibono, ezithuthukisa umbono ofanele wobuchwepheshe, ukubukwa kwemakethe okukhululekile ngokweqile futhi ukubukela phansi abezemvelo.
As UMonbiot wabhala ngo-2003, “isikhungo sezesayensi, ngaso sonke isikhathi esingenandaba nezepolitiki, sibonakala singahlosile ukuthi sasivumele izintshisekelo zaso ukuba zimelwe umphakathi ngamalungu oxhumano lwezepolitiki oluyinqaba futhi olungamasiko.”
I-Intercept: Abanakekeli Abazibiza Kanjani 'Bezomculo Ocacile' Bancoma Izikali Zezimboni
I-Atlantic: AmaLobbyist asiphotha kanjani isayensi ebuthakathaka ukuvikela i-BPA
Ukubuyekezwa kobuntatheli beColumbia: BPA, Health and Nuance: Umbiko we-STATS ugxeka ukusakazwa kwabezindaba kodwa unamaphutha awo
I-Consumer Reports: Imboni Iphendula Embikweni Wabathengi Umbiko we-BPA
CJR: Hlangana nendoda efuna ukusiza izintatheli ngezinombolo
USRTK: UJon Entine: I-Master Messenger Yezimboni Zamakhemikhali
Washington Post: I-Scaife: Uxhaso lukaBaba Welungelo
I-Drexel University: Hhayi Izelamani ZakwaKoch Nje: Isifundo Esisha seDrexel Siveza Abaxhasi Ngasemuva Komzamo Wokuphika Isimo Sezulu
Ibhulogi leDeSmogIzisekelo Zomndeni We-Scaife
Ibhulogi leDeSmog: UCharles G. Koch; Richard Mellon Sciafe; ISearle Freedom Trust; I-Donors Trust: Imininingwane Yokufunda Imali Emnyama Egeleza Ekuphikeni Kwesayensi Yezulu
Associated Press: IGeorge Mason University Iba Intandokazi kaCharles Koch
Huffington Post: KuCharles Koch, uProfesa bangamaLobbyists
Ukudla Okucatshangwayo, Uphenyo lwethu Umuzwa Ngezesayensi, UTrevor Butterworth